Jaaliyadda Soomaalida ee Nederlands oo cambaareysay weerarkii Bariire [Sawirro] | YoobsanNews.com
Jaaliyadda Soomaalida ee Nederlands oo cambaareysay weerarkii Bariire [Sawirro]
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Nederlands kulan ay maanta isugu timid magaalada Amsterdam, waxeey ka soo saareen bayaan ay ku cambaareynayaan weerarkii ka dhacay deegaanka Bariire ee Gobolka Sh/hoose, ee lagu laayey dad shicib ah oo tiradoodu gaareyso 10, ayna ku jiraan 3 caruur ah.
Bayaanka Jaaliyadda ka soo baxay oo ay ku saxiixnaayeen shaqsiyaad hormuud ka ah Jaaliyadaha Soomaalida, waxaa lagu xusay in Jaaliyadu, iyada oo ka tiiraanyeeysan weerarkii ka dhacay Bariire in ay uga tacsiyeyneyso qoysaskii ay ka baxeen dadkii weerarkaasi ku shahiiday, ayna ugu baaqeyso DF Soomaaliya in baaritaan dhab ah lagu sameeyo ciddii weerarkaasi ka dambeysay, lana hor-keeno cadaaladda.
Xubana bayaanka ku saxiixnaa oo ay ka mid yihiin ahaayeen; C/kariin, Maxamed Cusmaan (Guurre) Cali Maxamuud Daauud (Cali dheere), Xuseen Cilmi (Shiino), Sheekh doon Diini & xubno kale, waxaan ay ku tilmaameen nasiib darro in ciidamo ajnabi calooshood u shaqeystayaal ah ay ku shiis bartaan shacab Soomaaliyeed, dowladdii dadkaasi mas’uulka ka aheydna, una xilsaarneyd in ay difaacdana ay kaalinteedii ka gaabisay.
“Waxaan cambaareyneynaa xasuuqii deegaanka Bariire loogu geystay shacabkii Soomaaliyeed ee rayidka ah ee sida xaqdarrada ah loo xasuuqay iyo habkii ay weerarkaasi uga fal-celisay dowladda Soomaaliya, waxaan codsaneynaa shilkii meeshaas ka dhacay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo, ciddii ka dambeysayna ay dowladdu sharciga hor keentay, haddii ay dowladdu wax ka qaban weyso Jaaliyadda Soomaalida waxeey furi doontaa dacwad caalami ah” Ayaa lagu yiri bayaanka.
Bayaanka waxaa kale oo lagu yiri:
“Waxaa nasiib darro ah in shacabkaasi lagu gumaado saanadii ilaalin laheyd, waanu ka xunahay falkaas waana cambaareyneynaa”
Previous: Madaxweyihii hore oo kulan la yeeshay jaaliyadda Soomaaliya ee K. Afrika
Next: AMISOM Honours Sierra Leonean Police Officers For Contributing To Peace In Somalia